Tamarta jirka: noocyada, qeexida, qaaciddada iyo tusaalooyinka | Cusbooneysiinta Cagaaran
Jarmal Portillo | | Tababar
Xaqiiqdii waxaad wax ku baratay machadka tamarta dhaqdhaqaaqa maadada fiisigiska. Haddii kale, waxaad u badan tahay inaad ka maqashay daraasad cilmiyeed ama warbaahinta. Waxaana loo arkaa tamar aad muhiim ugu ah barashada dhaqdhaqaaqa walxaha. Waxaa jira dad aan wali ku cadayn fikirka tamarta dhaqdhaqaaqa ama sida loo cabiro ama u shaqeeyo. Maqaalkan waxaan dib u eegeynaa qeexitaanka iyo yutiilitiga ay tamartaan ku leedahay adduunka fiisikiska.
Ma rabtaa inaad ogaato wax kasta oo la xiriira tamarta dhaqdhaqaaqa? Kaliya waa inaad sii wadataa akhriska si aad wax walba u baratid 🙂
1 Waa maxay qeexidda tamarta kinetic?
1.1 Noocyada tamarta Kinetic
2 Sidee loo xisaabiyaa tamarta dhaqdhaqaaqa jirka?
3 Xoog khilaaf iyo dardargelinta
5 Maxaa xiiso leh oo ku saabsan?
6 Tusaalooyinka tamarta dhaqdhaqaaqa
Waa maxay qeexidda tamarta kinetic?
Marka laga hadlayo tamarta noocan ah, waxaa loo malaynayaa in xoogaa tamarta ah oo la helo si loo dhaliyo koronto ama wax la mid ah. Tamarta Kinetic waa tamarta uu shay leeyahay sababtuna waa in uu dhaqdhaqaaq yahay. Marka aan rabno in aan dardar galino shay, waa in aan ku dabaqnaa xoog gaar ah si uu uga adkaado xoogga isku dhaca dhulka ama hawada. Si tan loo sameeyo, taas awgeed, waxaan tamarta u wareejineynaa sheyga waxayna awoodi doontaa inay ku socoto xawaare joogto ah.
Waa tamarta la wareejiyay ee loo yaqaan 'kinetic energy'. Haddii tamarta loo adeegsado shayga ay sii kordheyso, shayga waa uu dhaqaaqayaa. Si kastaba ha noqotee, haddii aan joojinno isticmaalka tamarta, xoogga isku dhaca tamartiisa tamarta ayaa hoos u dhici doonta illaa ay istaageyso. Tamarta jirka waxay kuxirantahay cufnaanta iyo xawaaraha taasi waxay gaadhaa sheyga. Meydadka tiro yar ayaa u baahan shaqo yar si ay u bilaabaan dhaqaajinta. Sida ugu dhakhsaha badan ee aad u socotid, ayaa tamar aad u tiro badan oo jirkaagu leeyahay.
Tamartaan waxaa loo wareejin karaa walxo kala duwan dhexdoodana u rogaan nooc kale oo tamar ah. Tusaale ahaan, haddii qofku ordo oo ay isku dhacaan qof kale oo nasasho ku jiray, qayb ka mid ah tamarta dareemayaasha ee ku jirtay orodyahanka ayaa loo gudbin doonaa qofka kale. Tamarta ay tahay in la dalbado dhaqdhaqaaq jira waa inay marwalba ka weynaataa xoogga isku dhaca dhulka ama dareeraha kale sida biyaha ama hawada.
Noocyada tamarta Kinetic
Laba nooc ayaa lagu gartaa:
Tamar -dhaqameedka tarjumaadda: waa waxa dhaca marka shaygu tilmaamo xariiq toosan.
Tamarta kinetic ee meerto: waa midda dhacda marka shaygu is rogo.
Sidee loo xisaabiyaa tamarta dhaqdhaqaaqa jirka?
Haddii aan rabno inaan xisaabino qiimaha tamartani leedahay, waa inaan raacno sababaynta kor lagu sharaxay. Marka hore, waxaan ku bilaabaynaa helitaanka shaqada la qabtay. Shaqada ayaa loo baahan yahay in la qabto si loogu wareejiyo tamarta walaxda walaxda. Sidoo kale, shaqadaas waa in lagu dhufto xoog, iyadoo la tixgelinayo cufka walaxda ee lagu riixay meel fog. Xooggu waa inuu la mid noqdaa dusha sare halka uu joogo, haddii kale shay ma dhaqaaqi doono.
Qiyaas inaad rabto inaad dhaqaajiso sanduuq, laakiin waxaad u riixaysaa dhinaca dhulka. Sanduuqa ma awoodi doono inuu ka adkaado iska caabinta dhulka mana dhaqaaqi doono. Si loo helo si ay u dhaqaaqdo, waa inaan ku dabbaqno shaqada iyo xoog jihada u dhiganta dusha sare.
Waan soo wici doonnaa shaqada W, xoogga F, cufnaanta walaxda m, iyo fogaanta d.
Shaqadu waxay lamid tahay waqtiga masaafada. Taasi waa, shaqada la qabtay waxay la mid tahay xoogga lagu saaray shayga masaafada uu ku socdo mahadnaq ahaan xooggaas la adeegsaday. Qeexida xoogga waxaa bixiya cufnaanta iyo dardargelinta shayga. Haddii sheyga uu ku socdo xawaare joogto ah, waxay ka dhigan tahay in xoogga la adeegsanayo iyo xoogga khilaafku ay isku qiimo yihiin. Sidaa darteed, waa xoogag miisaanka lagu hayo.
Xoog khilaaf iyo dardargelinta
Isla marka qiimaha xoogga lagu saarayo shayga ay hoos u dhacdo, waxay bilaabi doontaa inay gaabiso illaa ay ka istaageyso. Tusaale aad u fudud ayaa ah gaariga. Marka aan wadno waddo weyn, laami, wasakh, iwm. Midka aan wadno wuxuu na siinayaa iska caabin. Iska caabintani waa oo loo yaqaan xoogga isku dhaca inta u dhexeysa giraangirta iyo dusha sare. Si uu gaariga u kordhiyo xawaarehiisa, waa inaan gubnaa shidaalka si aan u dhalino tamar. Tamartaan waxaad kaga guuleysan kartaa isku dhaca oo aad bilaabi kartaa inaad dhaqaaqdo.
Si kastaba ha noqotee, haddii aan la soconno gaariga oo aan joojinno xawaareyntiisa, waxaan joojin doonnaa inaan xoog ku dabaqno. Adigoon wax xoog ah saarneyn gaariga, ciidanka isku dhaca ma bilaabi doono inuu istaago ilaa gaariga uu istaago. Sababtaas awgeed, waxaa muhiim ah in si wanaagsan loo ogaado xoogagga faragelinta ku haya nidaamka si loo ogaado jihada uu u socdo shayga.
Sidaa darteed, marka qadar nadiif ah oo shaqo lagu qabto shay, inta aan ugu yeerno tamarta firfircoonida k, isbeddelo.
Maxaa xiiso leh oo ku saabsan?
Fiisigisyahanada, ogaanshaha tamarta firfircoonaanta ee sheyga waa mid daruuri u ah barashada firfircoonaanteeda. Waxaa jira waxyaabo samaawadeed oo hawada sare ku jira oo leh awood dabiici ah oo uu wado Big Bang oo, ilaa maantadan la joogo, wali ku guda jira dhaqdhaqaaq. Inta lagu jiro Nidaamka Qoraxdu waxay leedahay walxo xiiso leh oo la barto waana lagama maarmaan in la ogaado tamartooda jireed si loo saadaaliyo dhabarkooda
Markaan falanqeyneyno isla'egta tamarta jireed waxaa la arki karaa inay kuxirantahay xawaaraha sheyga laba jibbaaran. Tan macnaheedu waxa weeye marka xawaaruhu labalaabo, kinetikisyadu way laba jibbaaraan. Haddii gaari ku socdo 100km / saacaddii wuxuu leeyahay afar jeer tamarta ka badan midka safraya 50km / saacaddii. Sidaa darteed, dhaawaca shilka ku imaan kara wuxuu afar jeer ka xoog badan yahay midka midka kale.
Tamartaan ma noqon karto qiime taban. Had iyo jeer waa inay noqotaa eber ama togan. Si ka duwan iyada, xawaaruhu wuxuu yeelan karaa qiime togan ama mid taban iyadoo kuxiran tixraaca. Laakiin markaad isticmaaleyso xawaare laba jibbaaran, waxaad had iyo jeer helaysaa qiime togan.
Tusaalooyinka tamarta dhaqdhaqaaqa
Aynu aragno tusaalooyinka qaarkood ee tamarta dhaqdhaqaaqa si loo caddeeyo:
Markaan aragno qof saaran mooto, waxaan aragnaa inuu khibrad leeyahay kororka labadaba tamarta suurtagalka ah markaad dhaqaaleyso dhererka iyo tamarta firfircoonida markaad kordhineyso xawaaraha. Qofka culeyskiisu jirka ka weyn yahay wuxuu awood u yeelan doonaa inuu helo tamar firfircoon inta ay mootadu u oggolaaneyso inuu dhaqso u socdo.
Weel weel ah oo dhulka ku soo dhaca: Tusaalahan noocan ahi wuxuu muhiim u yahay fahamka tamarta firfircoonida. Tamarta ayaa ku soo baxda jidhkaaga markay soo degto waxaana si buuxda loo siidaayaa markay ka jabto markay dhulka ku dhacdo. Waa dharbaaxo bilow ah oo bilaabeysa inay soo saarto tamar firfircoon. Inta kale ee tamarta firfircoonida waxaa laga helaa culeyska dhulka.
Ku dhufo kubad: waa kiis la mid ah waxa ku dhaca weelka. Kubbadda nasashada waxay helaysaa isu-dheellitirnaan iyo tamarta firfircoonida waxay bilaabmaysaa in laga sii daayo markaan garaacno. Kubaddu markay culustahay oo sii weynaato, waxay qaadataa shaqo badan inay joojiso ama dhaqaajiso.
Markaan dhagax tuurno hoos uga tuurayno: waxay u dhacdaa si la mid ah weelka dhalada iyo kubbadda. Markuu dhagaxu hoos u dhaadhaco, tamarteedu way sii kordheysaa. Tamarta waxay ku xirnaan doontaa cufnaanta iyo xawaaraha dhicitaankiisa. Tani, markeeda, waxay ku xirnaan doontaa jiirada.
Gawaarida rooga ah: jardiinooyinka madadaalada ayaa fure u ah sharaxaadda tamarta dhaqdhaqaaqa. Markabka rooga ah, baabuurku wuxuu helayaa tamar firfircoon marka uu dhaco oo uu kordhiyo xawaaraha.
Waxaan rajaynayaa in macluumaadkan fikradda iyo isticmaalkeedu ay si badan kaaga sii cadayn doonaan.
Soo ogow qolka jimicsiga ee ku shaqeeya tamarta firfircoonida:
Jimicsiga ku dhex wareega tamarta firfircoonida ee ay abuuraan dadka iyo CircuitoEco
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » General » Tababar » Tamarta jirka
Waxba igama tarin, waxa kaliya ee aan doonayay waxay ahayd inaan ogaado sida loo xisaabiyo tamarta firfircoonida, wax kasta oo qoraalka ku qoran, horey ayaan u aqaan
Ka jawaab runta